Qeerroon Oromoo Afrikaa Kibbaa Oromoo Boonse!
Date: January 27, 2013Author: Oromedia 1 Comment
(Oromedia, 27 Amajjii 2013) Qeerroon Oromoo sababa addaddaan biyya abbaa isaanii irraa baqatanii biyya Afrikaa Kibbaa keessatti argaman waldorgommii kubbaa miilaa biyyattii keessatti adeemsisamaa jiru irratti argamuun qabsoo Oromoo fi warraaqsa bilisummaa Oromoo beeksisanii jiran.
Sabboontoti Oromoo kunneen waltajjii istaadiyeemii taphni kubbaa miilaa kan ardii Afrikaa gaggeeffamaa jiru keessatti argamuun mallattoo Oromummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta’e, Alaabaa ABO, heddumminaan qabatanii balaliisaa oolanii jiran.
Qeerroon kunneen oolmaa isaanii ilaalchisees suuraalee addaddaa kaasanii karaa walqunnamtii hawaasaa, yookaan FB, addunyaaf dabarsaa kan jiran yoo ta’u, miidiyaan akka TV woldorgommicha kallattiin dabarsaa jiranis Alaabaa ABO addunyaaf mul’isaa jiran.
Waldorgommii itti fufiinsaan adeemsisamaa jiru kana irratti argamaa kan jiran Qeerroon Oromoo, keessaayyuu, guyyaa taphattooti Itoophiyaa waldorgommii godhan bakkoota murteessoo ta’an qabachuun akka alaabaan Oromoo televizyiinota addunyaa irratti kallattiin mul’atu godhanii jiru.
Tapha kallattiin darbaa jiru dabarsaa kan ture, televinyiiniin Itoophiyaas otuu hin jaalatiin Alaabaa Oromoo biyya keessatti ittiin nama hidhaa fi dararaa jirtu ummatatti agarsiisuuf akka dirqamte odeessi biyya irraa arganne ni hubachiisa.
Yeroo Alaabaan ABO TV irratti mul’atettis daaw’attooti waldorgommii kubbaa miilaa ilaalaa turan, keessaayyuu dargagggooti yunvarsitootaa fi kolleejjoota keessatti argaman gammachuun iyyaa fi ililachaa akka turan Qeerroon gabaasee jira.
Qeerroon Oromoo Afrikaa Kibbaas akeeka isaanii Sagalee Bilisummaa Oromoof akka ibsanitti, sagalee ummata Oromoo biyya keessatti ukkaamsamee jiru ibsuun alattis carraa waltajjii waldorgommii miilaa kanatti dhimma bahuun gochaa mootummaa Itoophiyaa saaxiluu dha.
“Nuti jaalalaa fi deeggarsa ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoof qabnu beeksisuu dha,” kan jedhe Qeerroon Oromoo tokko, “bakka jirrutti qabsoo keenya beeksusuu fi jabeessuun dirqama keenya. Barri itti baiyya keessatti ukkaamfamnee ajeefamaa ti dhimmi keenya dhofkamaa ture dhumatee jira, amma bakka hunda jirra,” jechuun ejjannoo qabsoo bilisummaa Oromoof qabu hubachiisee jira.
Kana malees, gaaffii ummata Oromoo, qabsoo ummata Oromoo fi dararaa ummata Oromoo irra gahaa jiru addunyaatti beeksisuuf akka ta’e illee kanattis Qeerroon Oromoo afrikaa kibbaa keessatti argaman kunneen hubachiisanii jiran.
Previous Previous post: Barri haaraa fi Guyyaan Waraana Bilisummaa Oromoo haala hoo’aan kabajame; WBO jabeessuufis maaallaqni gumaachame!
Next Next post: Ba’aa Bilisummaa
One thought on “Qeerroon Oromoo Afrikaa Kibbaa Oromoo Boonse!”
Pingback: Qeerroon Oromoo Afrikaa Kibbaa Oromoo Boonse! « Oromo Freedom News and Views